पोखरामा पहिलो पटक ह्वाइटवाटर च्यालेन्ज हुँदै | .:: Welcome || Paryatannews
Home » :: हाईलाइट समाचार » पोखरामा पहिलो पटक ह्वाइटवाटर च्यालेन्ज हुँदै
पोखरामा पहिलो पटक ह्वाइटवाटर च्यालेन्ज हुँदै
पर्यटनन्यूज, कास्की । नेपाल एशोसियसन अफ् र्याफ्टिङ एजेन्टस् (नारा)ले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको हिमालयन ह्वाइट वाटर च्यालेन्ज यस वर्ष पोखरा स्थित सेती नदीमा गर्ने भएको छ ।
आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि विगतमा भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आयोजना गर्दै आएको ह्वाइट वाटर च्यालेन्ज यस वर्ष भने पहिलो पटक अपर सेती नदीमा आयोजना गर्ने जानकारी गरायो । यही नोभेम्बर २८ देखि ३० अर्थात मंसिर १३ देखि १५ सम्म अपर सेतीमा सो प्रतियोगिता हुने भएको हो । ह्वाइट वाटर च्यालेन्जको यो पन्ध्रौं संस्करण हो । कास्कीको मर्दीदोभानबाट याम्दी सेती बाँधसम्म झण्डै ९ किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको नदीमा उक्त प्रतियोगिता हुनेछ । जहाँ विदेशी र नेपाली खेलाडीहरु गरी करीब दुई सय जनाले सहभागीता जनाउने नाराका महासचिव शेखर थापाले बताए ।
ह्वाइट वाटर च्यालेन्ज तीन बिद्यामा हुने भएको छ । डाउन रिभर रेस एक किलोमिटर, स्ट्रीम सलालम र बोर्डर क्रस हेड टु हेड गरी प्रत्येक दिन एक÷एक बिधामा प्रतियोगिता हुने छ । प्रतियोगितामा हरेक विद्यामा प्रथम, द्वितीय र तृतीयलाई नगद, मेडल र प्रमाणपत्र पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रबद्र्धनमा सञ्चालन हुन लागिएको यस कार्यक्रमले पोखरालाई जल पर्यटन प्रबद्र्धनमा सहयोग पु¥याउने, सेती नदी सफा राखौं भन्ने सन्देश दिने र जल पर्यटनको विविधीकरण गर्न समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा नाराले गरेको छ । अध्यक्ष दाहालले आगामी दिनमा कालिगण्डकीसहित अन्य नदीहरुमा पनि गर्दै जाने बताए ।
पोखरामा पहिलो पटक ह्वाइटवाटर च्यालेन्ज हुँदै Reviewed by Shiva Shrestha on Nov 21 . पर्यटनन्यूज, कास्की । नेपाल एशोसियसन अफ् र्याफ्टिङ एजेन्टस् (नारा)ले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको हिमालयन ह्वाइट वाटर च्यालेन्ज यस वर्ष पोखरा स्थित सेती नदीमा गर पर्यटनन्यूज, कास्की । नेपाल एशोसियसन अफ् र्याफ्टिङ एजेन्टस् (नारा)ले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको हिमालयन ह्वाइट वाटर च्यालेन्ज यस वर्ष पोखरा स्थित सेती नदीमा गर Rating: 0